सात वटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिँदै, हेर्नुहोस कुन प्रदेशको राजधानी कहाँ ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
सात वटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिँदै, हेर्नुहोस कुन प्रदेशको राजधानी कहाँ ?
काठमाडौँ । सरकारले सात वटै प्रदेशको अस्थायी मुकामको खाका तयार पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशको अस्थायी मुकामको खाका तयार पारेको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले भौतिक पूर्वाधारका आधारमा ती अस्थायी मुकामको खाका तयार गरिएको बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश नंं १ को विराटनगर, प्रदेश नंं २ को जनकपुर, प्रदेश नंं ३ को भक्तपुरको ठिमी, प्रदेश नंं ४ को पोखरा, प्रदेश नंं ५ को दाङ, प्रदेश नंं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नंं ७ को धनगढी अस्थायी मुकाम तोकिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययनपछि ती ठाउँ उपयुक्त हुने भएपछि मुकाम राख्नका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको टोलीले प्रत्येक प्रदेशका सबै ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरी ती स्थानमा मुकामको प्रस्ताव गरेको हो । “टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि ती ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेर पठाएपछि हामीले खाका तयार पारेका हौँ”, प्रवक्ता पन्थीले भने, “अब आवश्यक अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती प्रस्ताव गरेका मुकामलाई तोक्ने छ ।”
अस्थायी रुपमा तोकिएका ती मुकाम प्रदेश सरकारले पुनः हेरफेर गर्न सक्नेछ । संवैधानिक रुपमा प्रदेश सरकारको दुई तिहाइ बहुमतले तोक्न सक्नेछ । सहसचिव पन्थीले भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारीको उपलब्धता, सञ्चार, साधनको उपलब्धता र विद्युत् आपूर्तिको हिसाबले ती अस्थायी सरकारमुकाम तोकिएको बताए ।
२०७४ पुस १८ गते प्रकाशित
२२५ प्रतिशत हकप्रद बाँडफाँड पछी, कर्णालीको झण्डै १८ लाख कित्ता लिलामीमा खुल्दै
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको २२५ प्रतिशत हकप्रद सेयर बाँडफाँट भएको छ । बैंकले ३३
कृषि विकासको बोनस सेयर सेयरधनीको डिम्याट खातामा
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट वितरण गरेको बोनस सेयर सेयरधनीहरुको डिम्याट
प्रदेश नं ३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ को मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा पेश गरेको
बलात्कार गर्न खोज्नेलाई संवेदनशील अंगमा हिर्काउँदा मृत्यु
दाङ । दाङमा बलात्कार प्रयास गर्ने एक पुरुषको हत्या भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १५
लघुवित्तको १ लाख ८० हजार कित्ता आइपीओ आउँदै, कहाँबाट दिने…
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. पुष्प कँडेल नियुक्त, को हुन्…
तयार रहनुहोस्, हाइड्रोको ८ लाख ४० हजार कित्ता आइपीओ आउँदैछ
ऋण मिलाए बापत सेवाग्राहीसँग कमिसन लिने वाणिज्य बैंकका सहायक प्रबन्धक…
प्रदेश नं २ ले थप्यो आठ दिन सार्वजनिक बिदा
सांग्रिलाकोे ८० प्रतिशत हकप्रदपछि, दिने भयो आकर्षण लाभांश र बोनस
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सुस्तता : आवश्यकता अनुसार भएन खर्च
काठमाडौँ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कूल रकम रु सात खर्ब छ अर्ब आवश्यक पर्ने भनिए
कार्यालय : लाजिम्पाट २, काठमाडौँ
© 2018 All Right Reserved Arthatantra News